अमेरिकाको न्युयोर्कबाट हराएका नेपाली विद्यार्थी २२ बर्षीय साहको शव भेटिएपछि आज अन्त्येष्टी ! मन अलिकति दया भए (R.I.P) लेख्नुहोस – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/अमेरिकाको न्युयोर्कबाट हराएका नेपाली विद्यार्थी २२ बर्षीय साहको शव भेटिएपछि आज अन्त्येष्टी ! मन अलिकति दया भए (R.I.P) लेख्नुहोस
अन्त्येष्टीमा अजयका बुबा महेन्द्र साह रौनियार र आमा ममतादेवी साह रौनियारको समेत उपस्थीति रहेको थियो । दुईदिन अगाडिमात्र अजयका बुबाआमा न्युयोर्क आइपुगेका थिए ।जनवरी २० को विहान झण्डै ५ बजे अन्तिमपटक ब्रुकलिन ब्रिजमा देखिएका अजयको शव हडसन रिभर र इष्ट रिभरको मिश्रण भएको बु्रकलिन ब्रिज नजिकैको पानीमा एंकरेज च्यानलमा भेटिएको थियो ।
उनको शव मार्च ९ मा नै फेला परेपनि पहिचान खुल्न नसकेकाले न्युयोर्क प्रहरीले अप्रिल २५ मा यसबारे मोरिस काउन्टीको प्रहरीलाई जानकारी दिएको थियो । अजयको झोला सी ब्राइटमा भेटिएको थियो । समुन्द्रको किनारमा जाँदा एकजना व्यक्तिले झोला भेटाएपछि अप्रिलको अन्तिम साता अधिकारीहरुलाई बुझाएका थिए ।